Irreecha Awustiraaliyaa: Mootummaan kaleessa siyaasaaf irreefannaa nu dhorke har'a kabajuun isaa jijjirama tokkoo Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIrreecha Awustiraaliyaa: Mootummaan kaleessa siyaasaaf irreefannaa nu dhorke har’a kabajuun isaa jijjirama tokkoo
Abbaan Malkaa Irreecha Meelboorn Awustiraaliyaa Obbo Daanyee Dafarshaa mootummaan kaleessa sababii siyaasaan walqabsiise biyyatti irreefannaa nu dhorkee har’a kabajuun isaas jijjirama tokko mul’ate jedhe.
(bbcafaanoromoo)—Gaafa Irreechaa qarruun malkaa abbaa malkaatiin dura saaqama. Osoo abbaan malkaa hin saaqiin namni kamiyyu irreeffachuu hin jalqabu.
Abbaan malkaa ammoo dhaqaafi gala malkaa isaa nama beekuufi ulaagaa guutu ni qabaata. Irreeffannaa biyya keessatti bakka gara garaatti taasifamuuf abbaan malkaa ni beekama.
Haata’u malee, yeroo ammaa wayita Irreechi addunyaa bakka gara garaatti ayyaaneffatamu kanatti ammoo abbaa malkaa akkamiin qabaatu?
Awustiraaliyaan kutaa addunyaa Oromoon waggootaaf itti irreeffachaa jirudha.
Oromonni biyya sana jiraatan Dilbata har’aa malkaa Melboornitti argamutti bahanii irreeffatu.
Akkuma waggota 10 darban keessa irreeffataa turan malkaa Bootaanik Paarkitti bahani akka irreeffatan Abbaa Malkaa Awustiraaliyaa ta’uun tajaajilaa akka jiru kan himan Obbo Daanyee Dafarshaa ni dubbatu.
“Ijoolleen keenya biyya hambaatti guddattanitti aadaafi duudhaa akka sabni keenya qabu itti agarsiisaa barsiifanna. Ijoollee keenya biyya faranjiitti horanneef fakkeenya taana jechuun namoota irreeffachuu eegalan keessa tokkon turre,” jedhe Daanyeen.
Waggoottan duraa maatii Oromoota afur taane irreeffachuu baane, amma namoota dhibbaan lakka’amaniitu malkaa Fuut Iskiree jedhamurratti hirmaata jedhe.
Waggaa sadan kana malkaa Bootaanik jedhamutti namoonni akka itti hirmaachuuf mijatuuf jijjirranne . Malkaan Bootaanik kun laga kibba Melboornitti argamudha jedhu Obbo Daanyeen.
Lakkoofsi hirmaattoota baraa baratti garaa garummaa qaba kan jedhan Obbo Daanyeen, iddoon Oromonni Awustiraaliyaa jiraatan irreecha malkaa kanaaf bahani waggaa waggaan uumaa galateeffatan kun Kibba Meelboornitti argama jechuun ibsu.
Irreechi aadaafi duudhaa Oromoo addunyaatti beeksisaa jira
Irreechi walqixummaa akka ta’e, mirga dubartootaa kan eeguufi namni hundi qooda akka qabu hawaasa biyyattif mul’ifna jedha.
Akka abbaa malkaatti dhaabadheen irreeffachisaa jira kan jedhu Obbo Daanyeen, akkamiin akka abbaa malkaa ta’anis ni hima.
”Abbaan koo abbaa abdaariiti, angafummaas qabna Kallacha ,Caaccuufi bokkuu qabna. Kanaaf akka Abbaa Malkaatti bakka bu’ee hojjachaa jiraachuu kaase.”
Waggaa 20 dura ( bara 1994) Hora Arsadeetti namoota lakkoofsaan muraasa turan waliin hirmaachuu kan dubbatu Daanyeen, amma irreechi biyyoota biraatti bal’achuu isaatti gammada.
Mootummaan kaleessa sababii siyaasaan walqabsiise irreefannaa nu dhorkee har’a kabajuun isaas jijjirama tokko mul’ate ta’uu hima.
Irreecha kana ilaalchisuun barreessaa hawaasa Oromoo Melboorniifi Koree Qindeessituu Irreecha Melboorn Obboo Dhaabasaa Waaqjiraa gaafanneerra.
Yeroo garaa garaatti qaamolee hawaaasa biyyatti sirna Irreecha kanarratti hafee turu himan.
Miseensonni Paarlaamaa Awustiraaliyaa sirnicharratti affeeraa turan aadaa gaariidha jedhanii akka dinqisiifatan dubbata.
Gaarummaa aadaan keenya qabus ni ibsinaaf kan jedhu Dhaabasaan, uffata aadaa keenya uffannee ijjoolleefi haadholii keenyaaf kabajaa akka qabnu wayita itti agarsiifnu baayyee gammadu, aadaan akkas fakkaatu jiraa jedhanii gaafatullee jedha.
Dubartoonni keenya yeroo eebbisan wayita arganis ni gammadu.
Paarlaamaa biyyatti otoo hin hafne deebisanii akka dubbatan himeera.
Dhaabasaan irreechi kun hawaasa Oromoo biyyatti keessa jiraatu waggaatti walitti fida jedha.
“Waan biyya keenya jiru fagannus hin dharraana, uffannaafi dubbannaafi sirballee aadaa keenya guyyaa kana mul’ifanna.”